बर्दियाको गुलरिया र दाङको तुल्सीपुरमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा क्रमशः बर्दियाको गुलेरिया र दाङको तुल्सीपुरमा आफ्नो १०४ औँ र १०५ औं शाखा संचालनमा ल्याएकोे छ। यीसँगै प्रदेश ५ मा बैंकको शाखा संख्या १२ पुगेको छ । यी शाखाहरुमार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै...
विराटनगरको तीनपैनीमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा बिराटनगरको तिनपैनीमा १०३ औं शाखा संचालनमा ल्याएको छ । प्रदेशनम्बर १ मा यो बैंकको १९ औं शाखा हो । यस शाखामार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने...
लक्ष्मी बैंकले यो वर्ष १०% सम्म लाभांश बाँड्नसक्ने, अन्य सूचकमा औसत प्रगति
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्नसक्ने देखिएको छ। बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म ७० करोड ५५ लाख वितरणयोग्य नाफा आर्जन गरेको हो । नाफाको यो दर चौथो त्रैमाससम्म पनि कायम रहेमा र नियामकीय व्यवस्था वा अन्य प्रयोजनका लागि थप दायीत्वहरु सिर्जना...
सोलुको सल्लेरीमा लक्ष्मी बैंक
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा १०२ औँ शाखा संचालनमा ल्याएकोे छ । यस शाखामार्फत बैंकले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस नयाँ शाखाको साथ...
लक्ष्मी बैंकले एशियन लाइफका पोलिसी बेच्ने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बिमा पोलिसी बिक्री गर्ने भएको छ । यो विषयमा बैशाख १५ गते एक सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशकुमार श्रेष्ठ र लक्ष्मी बैंंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाहले एक...
लक्ष्मी बैंकको ऋणपत्रको बिक्री प्रबन्धकमा नवील इन्भेष्टमेन्ट नियुक्त
काठमाण्डो । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले निकट भविष्यमा जारी गर्न लागेको १०% लक्ष्मी बैंक डिबेञ्चर, २०८६ को निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रममा दुवै कम्पनीबीच सो सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख...
बौद्ध र इमाडोलमा लक्ष्मी बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा क्रमशः काठमाण्डौको बौद्ध र ललितपुरको ईमाडोलमा आफ्ना १०० र १०१ औं शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । यी शाखाहरुमार्फत ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने...
एभरेष्टद्वारा मर्जर भाँडिएको औपचारिक घोषणा, लक्ष्मीमाथि यस्तो आरोप
काठमाण्डौ । भारतको पञ्जाब बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले लक्ष्मी बैंकसँगको मर्जर भाँडिएको औपचारिक घोषणा गरेको छ । बैंकले शुक्रबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त्यसका अध्यक्ष बि के श्रेष्ठले लक्ष्मी बैंकसँगको मर्जर असफल भएको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । उनले सो क्रममा लक्ष्मी बैंकसँग...
लक्ष्मी बैंक: निक्षेप घट्यो, बाँकी सूचकमा गज्जब प्रगति
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा वितरणयोग्य मुनाफातर्फ २९.४३ प्रतिशतको फड्को मारेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ५१ करोड ९२ लाख रहेको यस्तो मुनाफा बढेर ६७ करोड २१ लाखको उचाईमा पुगेको हो । कम्पनीको खूद नाफा ६५ करोडबाट बढेर ७२ करोड ३७ लाखको उचाईमा पुगेको छ भने ८१ करोड ६२ लाखमा सीमित संचालन...
माघ २८ गते लक्ष्मीको साधारणसभा, मर्जरसहितको अजेण्डा पेश हुने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आगामी माघ २८ गते आफ्नो १८ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । बैंकले सो दिन काठमाण्डौको कमलपोखरीस्थित अग्रवाल भवनमा साधारणसभा आह्वान गरेको हो । साधारणसभाको मुख्य अजेण्डामा मर्जर र एक्वीजिसनलाई समेत खुल्लै राख्ने रहेको छ । यो बैंक र एभरेष्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रिया निकै अगाडि बढेर अहिले...
लक्ष्मी बैंकद्वारा ८.५०% बोनस वितरणको प्रस्ताव, सूचना सम्प्रेषणमा लापरबाही
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई ८.५० प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको घोषणा गरेको छ । बैंकको बुधबार बसेको २१० औं बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई ८.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित बोनस सेयर नियामक नेपाल...
लक्ष्मी बैंकको सन्तोषजनक प्रगति: अधिकांश सूचक झनै बलियो
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा लामो समय अल्झिएको लक्ष्मी बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ । यो बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा बैंकको प्रगति झल्किएको हो । यो बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा(फ्री प्रफिट) अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९.६२ प्रतिशतले बढी २५ करोड १३ लाखको उचाईमा...
भाँडियो एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकबीचको मर्जर !
काठमाण्डौ । एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकको मर्जर अन्ततः भाँडिएको छ । विगत लामो समयदेखि जारी एभरेष्ट र लक्ष्मी बैंकबीचको मर्जर अन्तिम अवस्थामा सेयर स्वाप रेसियोमा कुरा नमिल्दा भाँडिन पुगेको हो । एक भारतीय र एक नेपाली कम्पनीले गरेको डिडिएको रिपोर्टका आधारमा तय भएको सेयर स्वाप रेसियोअनुसार मर्जमा जान एभरेष्ट बैंकले नमानेपछि र दिनहुँ...
लक्ष्मी-एभरेष्ट बैंकबीचको मर्जर भाँडिने अवस्थामा, कसले खेल्यो खेल ?
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकको तर्फबाट लगभग निश्कर्षमा पुगिसकेको एभरेष्ट बैंकसँगको मर्जर अन्ततः भाँडिने अवस्थामा पुगेको छ । डिडिए रिपोर्टका आधारमा आएको सेयर स्वाप रेसियोमा एभरेष्ट बैंकसँग मर्जमा जान तयार लक्ष्मी बैंकसँग एभरेष्ट बैंकको संचालक समितिले एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ शर्त तेस्र्याएपछि तीव्र गतिमा अगाडि बढी निश्कर्षमा...
लक्ष्मी बैंक र क्राउन लेब्रोटरीबीच सम्झौता
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक तथा क्राउन लेब्रोटरी एण्ड रिफरल सेन्टर (के–ल्याब)ले नेपाल अधिराज्यभर न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ्ग तथा के–ल्यावका तर्फबाट कान्ति थापाद्वारा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर...